Ukusweleka kwe-Arhente yeRekhodi | Martech Zone
Ukusweleka kwe-Arhente yeRekhodi
NgoLwesithathu, uDisemba 1, 2010 NgoLwesine, Julayi 2, 2015 Douglas Karr
Indawo yokuma komhlaba iyaziphathisa iiarhente.
Kwiveki ephelileyo, bendingekho kwiifowuni ezi-5 zokuthengisa apho ithemba sele linomboneleli ngenkonzo, bekhetha umboneleli, okanye sele benayo iarhente. Saqeshwa yinkampani enye ukonyusa umgangatho weinjini yokukhangela. Emva kokujonga indawo yabo phantsi komzuzu, ndibazise ukuba iya kuba ngumzamo omkhulu ngokunikwa i-CMS yabo yakudala. Baqhakamshelana ne-arhente eyabakhela indawo kwaye iarhente yabanika ngokukhawuleza enye ikhowuti yokuphucula i-CMS entsha. Kutheni le nto iarhente ingabazisanga ngaphambili?
Enye inkampani ibenze ukuba sikhuthale kwiqonga lokubloga. Ingxaki yayikukuba imibuzo ababenayo yayingangqinelani namandla eqonga. Kutheni le nto bebengazazi ngeendawo zokuthengisa zeqonga? Yayingumnxeba wokuthengisa ngokungxama apho iqela lalingazichonganga ngokwaneleyo iimfuno zethemba okanye izixhobo zabo.
Senza inkuthalo efanelekileyo kwenye inkampani ukuphonononga isicelo se-SaaS abafuna ukuyithenga. Inkampani isiqeshe ngenxa yamava ethu kwindawo ye-SaaS kunye nolwazi lwezicelo ezininzi kwintengiso. Babenemveliso yabo yangaphakathi kunye namaqela obuchwephesha- kodwa basafuna i olutsha khangela.
Asingobameli bakho abaqhelekileyo… okanye ndicinge njalo. KwiNgxelo yeMithombo yeendaba kwi-Intanethi yakutshanje eConsultancy, Baye bachonga umkhwa kwiiarhente kunye nendlela abathengisi abazisebenzisa ngayo. Iziphumo ziyamangalisa… kwaye ziqhelekile!
Akusayi kubakho bambi Ukusebenzisana kweRekhodi -Njengoko iifemu zearhente zidibanisa izibonelelo zazo kwaye ziwisa iisilo, akusayi kubakho mfuneko yokuba umthengisi akhethe iyunithi yedijithali njenge “arhente yerekhodi” yayo. (Oku ngaphandle kwenyani yokuba uluvo lwe "AOR" luphulukene nentsingiselo yalo njengoko abathengisi bekhetha ukusasaza uhlahlo-lwabiwo mali lweentengiso phakathi kweivenkile ezahlukeneyo.) Njengokuba iindonga phakathi kwendabuko kunye nonxibelelwano zisihla, iiyunithi zedijithali ziya kunyanzeleka ukuba Khetha phakathi kokuzixhasa ngokwabo kwisakhelo esikhulu se-arhente okanye umngeni kwiiarhente zemveli kulawulo olukhulu lweeakhawunti zemidiya nganye.
Uluhlu lokhuphiswano phakathi iivenkile zentengiso yedijithali iya kwanda -Ukutsala kwemfazwe phakathi kwemveli kunye nokuthengwa kweendaba kwi-Intanethi kuya kuboniswa kwihlabathi liphela lentengiso. Ngamanye amagama, njengoko abathengi bafuna indlela "yokwenene" yokwazisa, idabi lokukhokela iphulo alizukuqhutywa kuphela ngamadoda nabasetyhini, kodwa ziifemu zePR kunye nezindlu zedijithali zokuyila kunye neengcali zemidiya yoluntu ngokunjalo.
Ukuvela kwe I-Arhente edibeneyo - Njengokuba la madabi edlala, ubume benkampani enkulu obambeleyo buya kufuna ukunyusa iindawo zayo ezahlukeneyo ngokudibeneyo njengangaphambili. Ewe, izizathu zokubamba iinkampani zingene kwimisebenzi emininzi yokuthengisa, ukusuka kuyilo, ukuya ekucwangciseni nasekuthengeni, ukuya kwi-PR ukuya kwintengiso kunye neengcebiso zotyalo-mali yayikukufaka isiphumo esikhulu seGestalt, apho yonke inkulu kunenani lamalungu ayo. Akufuneki ukuba kuthethwe, ngaphandle kweminyaka ephantse ibe ngama-30 isebenza kuloo modeli, zimbalwa iinkampani ezibambeleyo ezinokuthi ngokwenene ziye zafezekisa le njongo, nangona kungenisiwe ngokuqinisekileyo.
Phuma kwisichazi-magama esidala, ngaphakathi kunye nesitsha -Kwixesha elidlulileyo, amagama anjenge- "GRPs," "inkangeleko" kunye "nokucofa," asebenze njengomgangatho wokulinganisa abaphulaphuli malunga nokukhokela inkcitho kunye nokumisela impumelelo yephulo. Ukubaluleka kwala magama akuyi kuba yimfuneko kangako. Zilungele ukuba zithathelwe indawo zizimvo "zexabiso lokuphila," "uvakalelo / ukuthanda" kunye "nefuthe." Nokuba ukusetyenziswa "kwabaphulaphuli" kulungele ukungcola kwimbali, kuba ibonisa iqela labantu elingenzi nto. Kwiminyaka ye-Intanethi "yokuya phambili" kwimithombo yeendaba enye kunye nokunyuka kweendaba zosasazo, elona gama lichanekileyo lokuchaza abathengi umthengisi afuna ukufikelela kubo liya kuba "ngabathathi-nxaxheba."
Uluhlu olucatshulwe kwi- Ingxelo yeMidiya ekwi-Intanethi ukusuka eConsultancy.
Kulapho HighbridgeUkukhula kuye… kwi I-Arhente edibeneyo isithuba. Sibe ngumlamli phakathi kwamaqela entengiso kunye nabanikezeli beenkonzo kunye neemveliso zabo, abo sikhuphisana nabo, abathengi babo, amathemba abo, abathengisi babo, iifemu zabo ze-PR kunye neearhente zabo. Lixesha elinomdla kuthi kwaye likhulu ukubona ukungqinisisa imodeli yethu yeshishini kule ngxelo.
Ukuba ungummeli-lixesha lokutshintsha iigesi, nokuba kunzima kangakanani. Kuya kufuneka usebenze nabanye abathengisi abanezinto ezahlukeneyo ezizodwa… nokuba kukho ukungangqinelani kokuhanjiswa. Ubambiswano lungenile. Ukuba uyinkampani- lixesha lokuba uphinde ucinge IArhente yeRekhodi kwaye uthathe ithuba lokwahlukahlukana kweengcali apha phandle ezinokukunceda woyise imiceli mngeni ye- entsha yeendaba.
Ayikwazi ngokuchasene neWill
Mhlawumbi Awulunganga Kule
Agasti 16, 2012 kwi-11: 36 AM
Isithuba esihle! Uyonwabele kwaye uyavumelana neengongoma zakho eziphambili.
Okt 3, 2012 ngexesha 9:54 AM
Ukonwabele kakhulu esi sithuba sikaDouglas. Asiboni nto ngaphandle kwezinto ezilungileyo ngalo lonke ixesha sifikelela kwenye iarhente.